Fahad Yaasiin iyo Kullane oo lagu eedeeyay kiis dil ah | KEYDMEDIA ONLINE
Fahad Yaasiin iyo Kullane oo lagu eedeeyay kiis dil ah
Taliye ku xigeenkii hore ee NISA Cabdalla Cabdalla, ayaa sheegay in uu aad u culus yahay kiiska Ikraan Tahliil Faarax, oo ah gabar ehelkeedu raadinayo muddo ku dhow labaatan maalmood.
MUQDISHO, Soomaaliya – Agaasmiye ku-xigeynkii hore ee Hay’adda Nabad-sugidda iyo Sir-doonka Qaranka, Gen Cabdalla Cabdalla, ayaa sheegay inuu baaris hordhac ah ku sameeyay kiiska Ikraan Tahliil Faarax, oo ehelkeedu baadi goobayaan muddo ku dhow labaatan maalmood.
Gen Cabdalla, wuxuu sheegay in kiiska Ikraan uu u muuqdu mid dil ah, lana mariyay waddadii ay Fahad Yaasiin iyo Kullane Jiis hore u mariyeen saraakiil badan, kaas oo ah in qofka la dilo lana qariyo, xitaa aan meydkiisa la arkin.
“Baaris Hordhac ah oo aan ku sameeyay kiiska Ikraan Tahliil Faarax, waxaa ii muuqata Ikraan inay martay waddadii Saraakiil hore ay marsiiyeen Fahad iyo Kulane Jiis ee ay u bixiyeen (Dil oo Qari) oo macneheedu yahay in aan qofka xataa meydkiisa la arkin”. Ayuu yiri Gen Cabdalla.
Taliye ku xigeenkii hore ee NISA Cabdalla Cabdalla, wuxuu hoosta ka xariiqay in fal-danbiyeed kasta uu leeyahay raad uu reebo, kaas oo ugu danbeyn bannaanka keena xaqiiqda rasmiga ah.
Caballa, wuxuu sheegay in sida ka muuqada CCTV, Kameroyinka kasoo bilowda Hotel Royal Palace, hotel Dorbin, iyo waddada Wasaradda Isgaarsiinta, ay muujinayaan in Ikraan gaarigii soo qaaday uu geeyay Godka Jilicow, 26-kii bishii hore.
“Fiidkii danbe gaari Ambulance ah oo NISA leedahay ayaa galay Xarunta Godka Jilicow kadibna wuxuu ka soo baxay isagoo la waardiyaynayo, waxa yaabka leh gaariga Ambulance-ta ah ma aadin Isbitalka ee wuxuu aaday magaalada banaankeeda wuxuu siday wax lasoo tuurayo ama la fogaynayo”. Ayuu yiri Cabdalla.
Wuxuu hoosta ka xariiqay in baariska kiiska Ikraan uu culus yahay waxuuna ku baaqay in baaris heer caalami ah la furo, si madax banaanna loo dabagalo arrinka Irkaan.
Sida ay sheegtay Hoooyo Soomaaliyeed oo lagu magacaabo Qaali Maxamuud Guhaad, oo xalay warbaahinta la hadashay gabdheeda Ikraan Tahliil Faarax, ayaa la la’adhay muddo 16 maalmood ah, waxayna xustay in ay afduubteen rag ka tirsan NISA.